Coral Reef: ဟိုဟို...ဒီဒီ...
Shinlay said on March 1, 2011 at 12:47 AM
အီကြာကွေ နဲ့ ပဲပြုပ် ကောင်းတယ်။
Soe Mya Nandar Thet Lwin (Borros Roxo) said on March 1, 2011 at 2:35 AM
Brit တို့ရဲ့ အသဲကျော် Colin Firth ကိုရော မကြိုက်ဘူးလား မဇွန်။ သူရဲ့ The King's Speech ကား သိပ်ကောင်းတယ်။ မင်းသားဆုရတာ ထိုက်တန်ပါတယ်။
အော်စကာမတိုင်ခင် UK မှာ အရင်ပေးမြဲဖြစ်တဲ့ BAFTA Awards မှာ မင်းသားဆု အရင်ရသွားထဲက သူ အော်စကာဆုရဖို့ ကျိန်းသေသွားတာ။ Brit တွေကတော့ သူ့အတွက် ဂုဏ်ယူနေကျလေရဲ့။
ဒေါက်တာအင်ဒီယာနာဂျူန်းကို crushed ဖြစ်တဲ့အထဲ နန္ဒာလဲပါတယ်။ :))
ဝဲမကင်းတဲ့ နန္ဒာ့ဘလောဂ့်ကို လင့်ခ်ပြန်ချိတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
အိမ့်ချမ်းမြေ့ said on March 1, 2011 at 4:32 AM
မလေး ဘယ်မင်းသားမှ မကြိုက်ဘူး၊ ဂျော်နီဒက်ပ်က လွဲလို့၊ မိုက်ကယ်ဒေါက်ကလပ်ကားတွေကိုတော့ ကြိုက်တယ်။ မင်းသားကိုတော့ မကြိုက်ဘူး၊ သူ့ရုပ်ရှင်တွေကို ကြိုက်တာပါ။
Rita said on March 1, 2011 at 7:28 AM
ကိုယ်ပြန်ရင် ၁၅ ရက် စခန်းဝင်ဖို့လို့ ပြောထားမိတာ။ (by force ကြောင့် ဝင်ရမှာ)။ မသိစိတ်ထဲကနေ အဲဒါကို ဘယ်လို ရှောင်ရမလဲ တချိန်လုံးပဲ စဉ်းစားနေမိတယ်။ ခု ပြန်ခါနီးလာတော့ သိစိတ်ထဲကပါ ရှောင်ဖို့ စဉ်းစားနေမိတယ်။
Ingjin said on March 1, 2011 at 11:15 AM
မမ...စိတ်မညစ်ပါနဲ့ စားသာစားပါ။ ငါ့အစ်မက ၀လည်းလှပါတယ်။ :)
လုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လုပ်အားပေးကုသိုလ်အတွက် သာဓုခေါ်သွားတယ်။
ဇွန်မိုးစက် said on March 1, 2011 at 8:32 PM
ဟုတ်တယ် အစ်မရှင်လေးရေ...အီကြာကွေးနဲ့ပဲပြုတ် မစားရတာ ကြာတာနဲ့ လုပ်စားဖြစ်သွားတာ။ ဇွန်လည်း ဒီနှစ်ထဲ တရားစခန်းဝင်ဖြစ်ပါ့မလား မသိဘူး။
နန္ဒာရေ... Colin Firth ကိုလည်း ကြိုက်ပါတယ်။ Pride and Prejudice တို့၊ Bridget Jone's Diary ကားတွေမှာ သူ့ကို သဘောကျမိပါတယ်။ Christian Bale ကလည်း အင်္ဂလိပ်ပဲလေ။ ဒီနှစ်အော်စကာက အင်္ဂလိပ်ဇာတ်ကားနဲ့ အင်္ဂလိပ်မင်းသားတွေရတဲ့နှစ် ဖြစ်သွားတာပေါ့။း)
မလေးက bad boy type ဂျော်နီဒက်ပ်ကိုမှ ကြိုက်တယ်ပေါ့။ :P
ရီတာပြန်မယ်လား၊ ကိုယ်လည်းဒီလထဲ ပြန်ဖို့ရှိတယ်။း) ရသလောက်သာ ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ပါ ရီတာ။
ဂျင်းရေ... မမ၀၀ကို အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးနော်။ :D ဟုတ်ပ... ရုပ်ရှင်တစ်ပွဲလောက် သွားကြည့်ကြရအောင်လား။း)
သက်ဝေ said on March 3, 2011 at 8:43 AM
ဘယ်အရာမဆိုပါ... သံယောဇဉ်ဆိုတာ ဖြတ်နိုင်လေ ကောင်းလေပဲလို့ ခဏ ခဏ တွေးမိတယ်။ မဖြတ်နိုင်သေးသ၍တော့ ပူလောင်နေရတာပဲ...
ညီမဆီမရောက်တာက မဲလ်ဝဲကြောင့် လင့်ခ်တွေ ပျောက်ကုန်လို့... ဒီနေ့မှ ရသလောက် ပြန်ချိတ်လိုက်တာ။
ဘလော့ဂ်ကိုလဲ သံယောဇဉ် ဖြတ်ကြည့်နေတာ.. ရသင့်သလောက်တော့ ရပါတယ်.. ဒါပေမယ့်လဲ ယတိပြတ်တော့ မဖြတ်နိုင်သေးဘူး...
ဖြတ်နိုင်တဲ့ သူ့ကိုတော့ တကယ် ချီးကျူးပါတယ်၊ သူ ကုသိုလ်တွေ အများကြီးရနေမှာတွေးပြီး မနာလို ဖြစ်မိသွားလို့... အော်.. ငါ့နှယ့် တော်တော်ဆိုးပါလားလို့ တွေးပြီး ပြန်လျှော့ရတယ်...း))
ချစ်ကြည်အေး said on March 3, 2011 at 9:04 PM
အမလည်း ဒီနေ့မှ လင့်ခ်တချို့ ပြန်ထည့်ရင်း ရောက်ခဲ့တယ်....နောက်မှ ပြန်လာမယ် ညီမရေ....
Anonymous said on March 5, 2011 at 4:44 AM
ဖဘလဲလာလာချောင်းကြည့်ပါတယ်။ ပိန်သွားတာလေးကြည့်ပြီး သဘောကျုနေတာပါ ဘုရားစူး .အခုမှသွားကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူး အရင်ကတေည်းက ကြိတ်ကြိတ်ကြည့်နေတာ. ယူနီဗာဆယ်သွားတာတို့.ညီမရှိုက်နေတုံးသယ်ချင်းတွေကအားပေးနေကြတာတို့.
Anonymous said on March 5, 2011 at 8:34 AM
နံပါတ်တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မှတ်ဥာဏ်ကောင်းလို့.. မွေးနေ့လိုမျိုး တစ်ခုခုရက်တွေဆို.. စိတ်ထဲ..အလိုလို..အမှတ်ရနေမိတာ။
မမင်း said on April 4, 2011 at 2:16 PM
အဟမ်း မျောက်မင်း ဝိတ်ချနေသည်။ ကျသွားရင် သတင်းပေးပါမည်။